घाँटी दुख्छ ? यसो गर्नुहोस् । | NepalDut
घाँटी दुख्छ ? यसो गर्नुहोस् ।
मौषम परिवर्तनका कारणले गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरु आउने गरेको हुन्छ , त्यसमध्ये हाम्रो समाजमा एक पटक घाँटी नदुखेका मानिस बिरलै होलान्। धुलो, धुवाँ र फोहोरमैलाको प्रदूषणले महामारीको रुप लिन लागेको बेला त यसको प्रकोप झनै बढ्दो छ। सडकमा पदयात्री एवं बाहन चालकहरुले धुलोबाट बच्न मकुन्डोधारी बन्न विभिन्न किसिमका मास्कहरु लगाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दो प्रदूषण र त्यसको खराबीबाट बच्ने चेतावनीको सूचक मान्नुपर्छ।
घाँटी दुख्नुको कारण उमेर हेरी विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरस र अन्य कारक तत्वहरुले हुनसक्छ। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा खासगरी भाइरस जस्तै इन्फ्लुएन्जा र विभिन्न किसिमका रइनो र एडेनो भाइरस ९रुघाखोकी० का कारण घाँटी दुख्ने गर्छ। यो रोगमाथि थप जिवाणु ९ब्याक्टेरिया० को आक्रमण नभएमा साधारण उपचार र निश्चित समय खासगरी एक हप्ताभित्र आफैं कम हुनेगर्छ।
पाँच वर्षदेखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकामा घाँटी दुख्नाको कारणमा स्टे«प्टोकोक्काई, हर्पेन्जाइना, डिप्थिरिया, माइकोप्लाज्मा, इन्फेक्सियम, मोनोन्युक्लियोसिस, ९कोक्साकी भाइरस० र भिन्सेन्ट्रस एन्जाइना ९फ्युजोब्याक्टेरिम्० छन्।
स्टेप्टोकोक्कल फाय्रिन्जाइटिस लागेका बिरामीको उपचार सजिलो छ। पेनिसिलिन इन्जेक्सन, पेनिसिलिन चक्की वा पेनिसिलिनबाट बनेका विभिन्न क्याप्सुलहरु दिएमा ठिक हुन्छ। पेनिसिलिनको एजर्ली भएकालाई इरिथ्रोमाइसिनले पनि ठिक गर्छ। यसका साथै तातो नुनपानीले कुल्ला गर्नु, तातो सुप एवं अन्य झोल पदार्थ खान दिने गर्नाले आराम हुन्छ। यो रोग लागेका व्याक्तिको जुठो अरुलाई नख्वाउनाले सर्ने सम्भावना कम हुन्छ।
वयस्क र बृद्ध तथा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिलाई घाँटी दुख्यो भने मुटुका धमनीको रोगको एक लक्षण, एन्जाइना पनि हुनसक्छ। यदि हिँड्डुल गर्दा घाँटी दुख्ने, रोक्किँदा कम हुने, घाँटी दुखाइको साथसाथै स्वाँस्वाँ आउने, ठण्डा पसिना आउने, मुटुको गति बढ्ने जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्तै अनुभवी तथा विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ।